Agaasimaha ciyaaraha Juventus oo ka hadlay xidig bar-tilmaameed koowaad u ahaa, kahor inta aysan u dhaqaaqin Ronaldo – Gool FM
Agaasimaha ciyaaraha Juventus oo ka hadlay xidig bar-tilmaameed koowaad u ahaa, kahor inta aysan u dhaqaaqin Ronaldo
(Juventus) 14 Feb 2019. Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Juventus Fabio Paratici ayaa xaqiijiyay in Cristiano Ronaldo uusan ahayn dooqooda koowaad ee suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay.
Fabio Paratici ayaa sheegay in Cristiano Ronaldo uusan ahayn dooqa koowaad ee kooxda Juventus, balse sidoo kale ay si weyn u doonayeen weeraryahanka reer Argantina iyo kooxda Inter Milan Mauro Icardi.
Wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa daabacay wareysi uu bixiyay agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Juventus Fabio Paratici waxyaabihii uu ka hadlayna waxaa ka mid ahaa:
“Juventus waxay ku guuleysatay todobo horyaal ee isku xigta, waxaan sidoo kale wayaabo fiican ka sameynay dhanka Champions League”.
“Ka dib markii uu baxay Buffon, waxaan la kulmay Andrea Agnelli iyo Pavel Nedved, waxaana dhamaanteen isku raacnay inaan la soo wareegno ciyaaryahan heer sarre ah”.
“Waxaa jiray laba wado ee lagu dhiirigelin karay kooxda, tan koowaad ayaa ahayd inaan iibsano weeraryahanka reer Argentina iyo kooxda Inter Milan ee Mauro Icardi, ama inaan u dhaqaaqno Cristiano Ronaldo, taasoo horeyba u dhacday”.
Waxaa xusid mudan in Cristiano Ronaldo uu kaga soo iibsaday Juventus, kooxda Real Madrid, aduun dhan 100 milyan euro.
"Saalax waa Xiddig aad u fiican laakiin waxaan heysanaa laacib joojin kara.".
Bartomeu oo ka warbixiyay hal arin uu doonayo inuu sameeyo ka hor inta uusan ka tagin xilka madaxtinimo ee kooxda Barcelona